Cilmi Boodhari ‘boqorkii jacaylka’ oo taallo looga dhisay Berbera - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka xoogsade
Image caption Taallo loo ekeysiiyay foornadii rootiga Boodhari uu ka shaqayn jirey
"Fikirka taalada waxay ku timid maadaamaa magaalada Berbera ahayd meeshii astaanta u ahayd, in magaalada laga helo marka qof dalxiis ah yimaado meel lagu xusuusan karo, waxaan isla garanay in aan u samayno taallo u gaar ah, oo magaciisa ku xardhanyahay, gabadhadiisii iyo astaamihiisii oo dhana ay ku xardhanyihiin" ayuu yiri Agaasime Jimcaale.
Qoys Soomaaliyeed oo ku caan baxay curinta suugaanta
Maxay muhiim u tahay in aan ka hadalno gogol dhaafka?
Caydaruus Cabdullaahi Ismaaciil (Beershiya) oo ay BBC-da la xiriirtay, waxna ka weeydiinay sida uu u arko taallada laga dhisay halkii uu ku aqal galay ayaa yiri "maadaamaa Berbera ay taariikh gaar ah u leedahay Boodhari, oo marka lasoo hadal qaado ay maskaxdaada kusoo dhacayso boqorkii jacaylka Cilmi Boodhari, waa tii abwaanku lahaa--- Berbaraay, beertii Jacaylkee, Boodhari ku aasnaa ---- aad bayna muhiim u tahay in taallo iyo meel lagu xusuusto loo sameeyo".
Lahaanshaha sawirka Caydaruus Beershiya
Image caption Caydaruus Beershiya iyo lammaantiisa oo ku aqal galay xeebta Badtalaale
"maadaamaa arooskayga Berbera ka dhacay, si gaar ahna ugu sii suntanyahay Boodhari, aad baan ugu faraxsanahay" ayuu intaas ku daray Caydaruus oo sidoo kale sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay booqan doonaan taalladan.
Maamulka magaalada Berbera ayaa sidoo kale qorsheynaya in suugaantii iyo buugaagtii laga qorey jacaylkii Cilmi Boodhari ay dhigaan madxafka magaalada, waxaana buugaagtaasi ka mid ah wiil ay dhashay Hodan oo ahayd gabadhii uu jacaylkeeda u dhintay Boodhari, kaas oo lagu magacaabo Rashiid Maxamed Shabeel, buugaas oo ciwaankiisu yahay 'JACAYL WAA LOO DHINTAA'.
Image caption Buugga : JACAYL WAA LOO DHINTAA
Waxaa la arki jirey in taallooyinka loo sameeyo dadkii halgamayaasha, hase yeeshee sida uu sheegayo Caydaruus Beershiya in qof wax jeclaaday taallo loo sameeyo in ay tahay arrin dhiirogalinaysa jiilka cusub "waxay direysaa fariin ah in ay lammaanaha is heli karaan, isna weyn karaan, jacaylkuna yahay wax jira" ayuu intaas raaciyay Caydaruus.